बिग बोस १५ कि प्रतिष्पर्धी तेजस्वी प्रकाश बिग बोसको घरमै गर्भवती, आखिर कस्को बच्चा छ उनको पेटमा ? – OSNepal
बिग बोस १५ कि प्रतिष्पर्धी तेजस्वी प्रकाश बिग बोसको घरमै गर्भवती, आखिर कस्को बच्चा छ उनको पेटमा ?
Loknath Rijal (Jhapa) January 12, 2022 0
वास्तवमा, बिग बोसको एक शो मा होस्ट सलमान खान र उनका पार्टनर तथा बलिउड स्टार गोविन्दाले तेजस्वी प्रकाशलाई उमर रियाजसँग ठट्टा गर्न लगाएका थिए । सलमान खान र गोविन्दा दुबैले तेजस्वीलाई आफूले उमर लाई के भन्न खोजेको बताएका थिए । प्रतियोगी तेजस्वी प्रकाश उमरसँग बोल्दै भन्छिन्– मलाई ग्याँस भरिएको छ यति भनेपछि उमर चर्को स्वरमा हाँस्छन् । तेजस्वी आक्रोशित हुँदै भन्छिन्– यो मजाकको कुरा होइन ।
सलमानको निर्देशनमा तेजस्वी भन्छिन्, –म आमा बन्न जाँदैछु । यो सुनेर उमरको बोली नै रोकिएको थियो । उमर भन्छन्– के भन्दै छौ ? तेजस्वीले आफ्नो ठट्टा जारी राख्दै भनिन्,–के ग्यासका कारण केटी गर्भवती हुन सक्छ।ू उमर रियाज अलमलमा पर्छन् र त्यहाँबाट निस्किन्छन् । हाल उमर शो बाट भने बाहिरि सकेका छन् । उनले प्रतिक सहजपाल माथि हातपात गरे पछि उनलाई दर्शकको माध्यम देखाएर शो बाट निकालिएको हो ।